January 2019 - Ceelhuur Online
January 31, 2019 January 31, 2019 Cali Yare406
Shir lagu suuq geynayo shidaalka Soomaaliya ayaa 7-da bisha February ka furmaya magaalada London ee Caasimadda UK. Shirkaan waxaa la soo bandhigi doonaa xirmooyin 50 (blocks) oo ah goobaha shidaalka ceegaaga ee Soomaaliya, kaasoo ah dhul ku teedsan 173,000 KM. Shidaalka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay Khayraadka dadka Soomaaliyeed ay wada leeyihiin, In loo hawlgalo Suuq-gayntiiasa, […]
Xaaf Ducaale oo gaaray Gaalkacyo
January 31, 2019 January 31, 2019 Cali Yare467
Wafdi uu hoggaaminaayo Madaxweynaha Galmudug garabka Dusmoreeb Axmed Ducaalle Geelle Xaaf ayaa Saaka gaaray Magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay Mr Xaaf, waxaana uu sheegay in maalmaha soo socda in uu ku sugnaan doono Gaalkacyo. Wafdiga Xaaf ayaa ka yimid dhanka Magaalada Garowe ee Caasimadda Puntland, […]
Faa faahin: Weeraro ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose
January 31, 2019 January 31, 2019 Cali Yare430
Al-Shabaab ayaa sheegtay dagaal culus oo ka dhacay duleedka degaanka Jasiira in ay ku qabsadeen gaari nooca gaashaaman ka dib markii Wadada u galeen Ciidamo ka tirsan AMISOM iyo xoogga dalka Soomaaliyeed. Al-Shabaab ayaa sheegtay in dagaalkaasi ay ku dileen Lix Askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Dhanka kale Al-Shabaab ayaa weerar ku […]
Akhri Magaca: Nabadoon Caan ah lagu Dilay Degmada Afgooye.
January 31, 2019 January 31, 2019 Cali Yare750
Wararka laga helayo Degmada Afgooye ee Gobalka sh/Hoose ayaa sheegaya in xalay Koox hubeysan ay Nabadoon Caan ah ku dileen halkaasi. Nabadoonka Ayaa lagu Dilay Xaafadda Godey oo ka Mid ah Xaafadaha ku yaala Gudaha Degmadaasi Afgooye ee Gobalka Sh/Hoose. Kooxaha Dilka Nabadonka ka dambeeyay ayaa Goobta isaga baxsaday iyadoo Ciidamada Amaanka ay sameeyeen Baaritaano […]
January 31, 2019 January 31, 2019 Cali Yare596
Mas’uuliyiin ka tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa xaqiijiyay in inta badan aysan hirgalin Ballanqaadyaddii Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sameeyay Markii uu booqasho ku tagay degaanada maamulada Puntland iyo Galmudug sanad ka hor. Janaayo, 10. 2018 Madaxweyne Farmaajo waxaa uu dhax dhigay waddo Laami ah oo isku xirta degaannada Dan-Goronyo iyo Eyl ee […]
January 30, 2019 January 30, 2019 admin458
Dowladda boqortooyada UK ayaa maanta safiir cusub waxa ay usoo magacowday dalka Soomaaliya. Safiirka cusub ee UK u fadhin doonaa waddanka Soomaaliya ayaa loo magacaabay Ben Fender, sida lagu sheegay qoraal uu soo saaray xafiiska arrimaha dibedda dalkaas. Fender ayaa waxa uu xilka kala wareegi doonaa David Concar, marka la gaaro bisha Febraayo ee soo […]
January 30, 2019 January 30, 2019 Cali Yare398
Madaxweynaha dalka Kenya iyo Ra’isul-wasaaraha Somalia waxay shalay kulan khaas ah ku yeesheen Aqalka dowladda ee magaalladda Nairobi, iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal, Ammaanka, Horumarinta, Deganaanshaha iyo Dagaalka Alshabaab. Ra’iisul-wasaare Xasan Cali Kheyre waxa uu Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta uga mahad celiyey doorka Kenya ee isbedelladda haatan ka socda Somalia, wuxuuna Madaxweyne […]
January 30, 2019 January 30, 2019 Cali Yare410
Wasaaradda Gaashaandhiga ee dalka Ethiopia waxay sheegtay inay Duqeyn dhinaca Cirka ku qaadeen Saldhig ay Dagaalamayaasha Alshabaab ku leeyihiin Deegaanka Buur Haybe oo 75 KM dhanka Bari kaga toosan magaalladda Baydhabo oo Xarun KMG u ah Maamulka K/Galbeed. Hadal-qoraal oo ay Wasaaradda Difaaca Ethiopia u dirtay Warbaahinta Ethiopia ee EBC ayaa lagu sheegay in Duqeyntaasi […]
Two terror suspects arrested at Dajabula on Kenya-Somalia border
January 30, 2019 January 30, 2019 Cali Yare502
A New Zealand national is among 12 people who were arrested near the Kenyan- Somalia border in the latest crackdown on terror suspects. Inspector General of Police, Joseph Boinnet said the New Zealander Sulub Warfaa, 36 was arrested with the two passports bearing different names. The other passport had the name Ramadhan Yusuf. Another suspect […]
Bandow lagu soo rogay Jigjiga
January 30, 2019 January 30, 2019 Cali Yare418
Ugu yaraan 2 ruux ayaa ku dhimatay Saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen rabshado ka dhacay Magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad degaanka Soomaalida ee Itoobiya. Rabshaddaha ayaa yimid ka dib markii ay isku dhaceen Qowmiyaddaha Soomaalida iyo waliba Amxaaradda ee dalka Itoobiya. Shir deg deg ah oo ay yeesheen Hay’addaha Ammaanka ee dowlad degaanka ayaa […]